Abaphakeli bamaRake neFektri - China AmaRake Abakhiqizi
Imininingwane Yomkhiqizo 65Mnwe wokuqina okukhulu kwentwasahlobo-izinyo kuqinisekisa ukuthi le hayrake ikwazi ukuzivumelanisa nokwakheka komhlaba okuhlukile. Ingalo yayo eyi-rocker ingazungeza ama-degree angama-90, ngaleyo ndlela ikwazi ukwenza ugandaganda usebenze emasimini. Okwamanje, i-angle ehlangene ingashintshwa ukuze ihlangabezane nezidingo ezahlukahlukene. I-Technical Specification Model Unit 9LZ-2.5 9LZ-3.0 Ububanzi bokusebenza mm 2500 3000 Amandla afanayo hp ≥15 30-40 Qty yama-disc pcs 4 5 Swath ububanzi mm 500-1500 ...
Imininingwane Yomkhiqizo Umshini we-disc hay rake ulungele ukulengiswa kudivayisi yokumiswa enamaphuzu amathathu kagandaganda onamasondo. Ingxenye esebenzayo yi-disc enamazinyo. Umshini we-hay rake udluliselwa kupuleti lokugcina lomunwe ngokulandelana kwepuleti lomunwe kuze kwakheke umucu wotshani ovulekile nomoya onomoya. Shintsha i-engeli lepuleti lomunwe ungalungisa ububanzi bendawo yotshani. Ukugoqa amazinyo entwasahlobo yensimbi yamazinyo, ukuhlanganisa umphumela omuhle, ukusebenza okunamandla kokukopisha. I-rak ...